အထူးကဏ္ဍ Archives | Page 29 of 31 | Frontier Myanmar
laukkaing_2_.jpg ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ဖုန်ကြားရှင်ဦးဆောင်သည့် ကိုးကန့်တပ်(MNDAA)တို့အကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် သမ္မတ၏အမိန့်ဖြင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့်ထုတ်ထားခဲ့ရာ ယခုထိုအမိန့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်တွင် သမ္မတက နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှတဆင့် ကြေညာသည်။ “မူလအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများ.
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၂,၀၀၀ ခန့်ရှိသွားပြီ၊ သေဆုံးသူ အရပ်သား ငါးဦးရှိ
လဲချား၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် အက်စ်အက်စ်အေ(မြောက်ပိုင်း)နှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိ သဖြင့် တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေး နေရသည့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဦးရေ စုစုပေါင်း ၂,၀၀၀ ခန့် ရှိနေပြီဟု ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသော Frontier သတင်းထောက်က နိုဝင်ဘာ ၁၇ ညနေပိုင်းတွင် သတင်းပေးပို့သည်။ ထို့ပြင်.
ရန်ကုန်တွင် လျှပ်စစ်အသုံးများချိန်၌ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ဓာတ်အားပေးမည်
ဓာတ်ငွေ့တွန်းစက် တစ်လုံး ပျက်သွားသဖြင့် ဓာတ်အားအလှည့်ကျပေးသွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဓာတ်ပုံ – မြန်မာ့လျှပ်စစ် ရန်ကုန်ကို လျှပ်စစ်မီးပေးရန် အဓိကဓာတ်ငွေ့ ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် မုတ္တမပင်လယ်ကမ်းလွန်ပြင်မှ ဓာတ်ငွေ့တွန်းစက် တစ်လုံး ပျက်သွားသဖြင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းသွားပြီး တစ်မြို့လုံးကို တပြိုင်နက် လျှပ်စစ်မီး အလုံအလောက်ပေးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်သွားကြောင်း ရန်ကုန်.
ရန်ကုန်၏ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာမည့်အဆောက်အအုံ မီးလောင်
မီးလောင်နေဆဲ ဒိုင်းမွန်းအင်းလျားပဲလေ့စ် အဆောက်အအုံကိုတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့၏ အမြင့်ဆုံးအထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဖြစ်လာမည့် ပါရမီလမ်းနှင့်ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်းထောင့်ရှိ ဒိုင်းမွန်းအင်းလျားပဲလေ့စ်အမည်ရှိ ကွန်ဒိုမီနီယံ အဆောက်အအုံသည် မပြီးစီးသေးခင် ဆောက်လုပ်ဆဲ အခြေအနေမှာပင် မတော်တဆမှုကြောင့် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် နံနက် အစောပိုင်းက မီးလောင်ကျွမ်း ခဲ့သည်။.